Beauty | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Ahoana ny fomba hanaovana ny fanamboaran-damba mahazatra ao an-trano. Tips
Mahatsiaro mahazatra ny poleta fantsika manjelanjelatra. Noho izany, ny vehivavy lamaody dia manana faniriana marim-pototra hanova endrika ny endrika. Matte manicure dia konsep izay nipoitra tato ho ato. Niala tsikelikely ity famolavolana hoho ity ...
Perfume "Victoria Secret" (Victoria's Secret): hevitra, vidiny
Ny marika amerikana malaza an'i Victoria's Secret dia natokana hamoronana singa tsara sy manitra. Amin'ny ankapobeny, ity marika ity dia mamokatra fanangonana akanjo anaty tsara tarehy sokajy "mihaja", ary koa ...
Ahoana ny fomba hanaovana manicure misy lavaka?
Ny tanan'ny vehivavy dia tokony ho madio sy manintona foana. Manicure no dingana farany amin'ny famoronana fomba. Afaka mameno tsara ny sary manokana izy io, na mety tsy ho tanteraka tanteraka. Ao amin'ity lahatsoratra ity ...
"Sambo" tatoazy: inona ny dikany miafina an'ity sary ity?
Azonao atao ny maneho ny maha-izy anao amin'ny fomba samihafa: misy aleony manao azy amin'ny tanana, mamorona zavatra tany am-boalohany sy manokana, misy misafidy miantsena ary maneho ny fombany amin'ny akanjo, ary misy misafidy ny toerana ...
Stylish mint manicure (sary)
Ny loko mint dia efa nekena ho fironana amin'ny vanim-potoana manaraka. Ireo mpamorona lamaody eran'izao tontolo izao dia mampiasa am-pahavitrihana ity alokaloka maitso mavana marevaka ity amin'ny fanangonana vaovao. Tsy afa-bela amin'ny aloky ny ronono sy ny fantsika amin'ny lamaody, satria ny maniky dia mint ...
Alien - ranomanitra nataon'i Thierry Mugler. Ny firafitry ny ranomanitra, ny hanitra ary ny hevitry ny mpanjifa
Androany dia hitsapa karazana vokatra telo ao an-tranon'i Thierry Mugler antsoina hoe Alien izahay: ranomanitra (na ny marina, eau de parfum) "Alien" sy ireo zandriny roa lahy - "O Extraordinair" sy "Sanness". Tsy azo lazaina fa ...
Tom Ford (fofona ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy): fanamarinana ny mpividy sy ny manam-pahaizana
Tom Ford dia olona malaza, be faniriana ary tany am-boalohany izay nahatratra ny fitantanana ny sarimihetsika, ny maritrano ary ny ranomanitra. Namorona empira tamin'ny tànany ity lehilahy ity ary nahazo ny anaram-bosotra hoe "mpanjaka tsy mety simba". Na izany aza, tsy izy ihany ...
LPG-fitaovana (massage): fanavaozana
Ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny hoditra na ny fanorana LPG dia nampiasaina tamin'ny 30 taona lasa teo. Ny milina LPG dia novolavolain'ny injeniera frantsay taorian'ny nahitany loza ary tsy maintsy nianatra taranja ...
Ahoana ny fisafidianana ny felatanana amin'ny fanitarana?
Volomaso lava lava volo dia mahatonga ny vehivavy ho toa maneho sy misitery kokoa amin'ny fotoana iray. Ireo izay tsy dia nanam-bintana hanana izany dia afaka mampiasa ny serivisy fanitarana. Salons maro no manolotra azy ...
Kompas - tombokavatsa ho an'ny vintana
Tsy azo soloina ny kompà eny an-dalana. Izany angamba no antony mahatonga ny mpandehandeha mazoto maro handavaka ny vatany amin'ny tatoazy miloko miaraka amin'ny sariny. Ny kompà dia tatoazy izay tsy vitan'ny mpandehandeha romantika ihany, fa koa ...
Doko volo Rowan: loko misy loko, hevitra
Ny lokon'ny volo Rowan, ny paleta izay manolotra zazavavy manodidina ny telopolo isan-karazany, dia malaza. Misy antony marobe amin'izany. Ny vehivavy mampiasa "Rowan" dia manamarika fa lafo io, tsy misy fofona, tsy ...
Foundation Max Factor maharitra. Lavorary ny hoditrao
Tsy azo inoana fa misy tovovavy iray farafaharatsiny eto amin'izao tontolo izao izay afa-po tanteraka amin'ny bika aman'endriny. Misy zavatra tsy maintsy ho diso. Matetika anefa ireo zazavavy dia tsy faly amin'ny hodiny, izay tsy mahagaga raha jerena ny zava-misy iainana ankehitriny. ...
Pilki nail (SPb): vaovao, adiresy, hevitra
Vao haingana kokoa, azo atao ny mahazo manicure amin'ny salon ambony ihany ary amin'ny vidiny lafo be. Miova ny fotoana, mitombo ny tsenan'ny serivisy. Na izany aza, ny tahan'ny vidiny sy ny kalitaon'ny indostrian'ny fantsika, na dia amin'ny ...
Fototra "Faberlik", "Double agents": hevitra. Tsiambaratelo momba ny makiazy
Ny Foundation dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny kitapo fanaingoana tarehy ho an'ny vehivavy, raha tsy misy izany dia tsy azo atao makiazy: isan'andro na hariva. Izy io dia fanafenana afaka manafina ny tsy fahalavorariana amin'ny hoditra, reraka ...
Inona no atao hoe vetiver? Mahatsiaro ny endriny?
Inona ity akora manitra ity - vetiver? Manao ahoana ny fofona? Vetiver dia ahitra avy amin'ny fianakavian'ny voamadinika, zavamaniry mitombo haingana izay afaka miaina hatramin'ny 50 taona na mihoatra. ...
Saron-tava tarehimarika turmerika: fomba fitsaboana, fanatsarana, fanavaozana
Amin'ny ankapobeny isika dia tsy mihevitra ny zava-manitra ho additives amin'ny sakafo fotsiny. Saingy amin'ny firenena atsinanana maro dia tsaboina amin'ny fomba hafa tanteraka izy ireo. Ny olona monina ao dia manompo sampy azy ireo ary mihevitra azy ireo ho tena "fanomezana ho an'ny andriamanitra." ...
Ahoana no ahafahana manaparitaka bang mba tsy hanelingelina azy? Fikarakarana sy fananganana Bang
Tsy isalasalana fa ny bangs dia ho lasa lantona mamirapiratra amin'ny taovolo rehetra. Indraindray ianao te-hanaparitaka ny sary. Fa ny fomba hambolena bango mba tsy hanelingelina azy, tsy hiteraka korontana ary, amin'ny farany, tsy manimba ny endrika isan'andro ...
Fiakanjo maoderina ho an'ny mpilalao baolina kitra
David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ary mpilalao maro hafa dia tadidintsika fa tsy noho ny lalao kilasy voalohany ihany, fa noho ny volon'izy ireo tsy mahazatra. Ankoatry ny talenta ara-panatanjahantena dia manana fahatsapana tsiro lehibe izy ireo. About ...
Mandra-pahoviana no hikolokolo ny hela? Manicure dia mividy, fanavaozana
Manicure tsara tarehy sy maharitra dia nofinofin-jazavavy maro. Ary nanjary zava-misy izy tamin'ny fisian'ny poloney gel izay maharitra ela toy ny gel fanitarana fantsika ary mora ampiharina toy ny fantsika. Tonga lafatra ...
Ahoana ary ahoana ny fomba fanovana ny mangana eo ambanin'ny masony?
Hematomas (mangana) dia iray amin'ireo olana marefo indrindra, indrindra amin'ny tranga izay tsy azo afenina amin'ny fiarahamonina. Ny fizotry ny fisehoan'ny hematoma dia tsotra ihany: aorian'ny fahasimban'ny sela marefo, indrindra ny sela marefo na ...
49 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,298.